Tronsmart ONYX PRIME, विश्लेषण र प्रदर्शन | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 26/12/2021 14:00 | सामान्य, समीक्षा
केहि वायरलेस हेडफोन खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईले देख्नु भएको होला, यो सजिलो काम होइन, हाल बजारमा विकल्पहरूको विशाल संख्या दिएर। तसर्थ, अन्तमा तपाईलाई चाहिने ट्रु वायरलेस हेडफोनहरू फेला पार्ने कार्यमा मद्दत गर्न, आज हामी Actualidad ग्याजेटमा एउटा नयाँ, रोचक विकल्प भन्दा बढि, Tronsmart ONYX PRIME ल्याएका छौं।
हामीले यी Tronsmart हेडफोनहरूलाई केही दिनको लागि परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं र त्यसपछि हामी तपाईंलाई हाम्रो प्रयोगको अनुभव, हामीले फेला पार्न सक्ने सुविधाहरू र तपाईंले छनौट गरेको खण्डमा एउटा प्राप्त गर्न सक्ने मूल्यको बारेमा सबै बताउनेछौं।
1 अनबक्सिङ Tronsmart ONYX PRIME
2 यो Tronsmart ONYX PRIME हो
3 Tronsmart ONYX PRIME द्वारा प्रस्तावित सुविधाहरू
अनबक्सिङ Tronsmart ONYX PRIME
हामी सधैं गर्छौं, हामी तपाईंलाई सबै कुरा देखाउँछौं जुन हामीले ONYX PRIME को बक्स भित्र फेला पार्न सक्छौं Tronsmart द्वारा। लगभग सधैं जस्तै, हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि हामीले कुनै आश्चर्य फेला पारेनौं। हाम्रो आफ्नै छ हेडफोन्स, the चार्जिंग केस, संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शन प्रयोगकर्ता र UBS प्रकार C केबल केसमा ब्याट्री चार्ज गर्न।
किन्नुहोस् Tronsmart ONYX PRIME उत्तम मूल्यमा अमेजनमा
बाँकीको लागि, हामी पनि फेला पार्छौं प्याड को अतिरिक्त सेट को एक जोडी हेडसेटको समायोजन, तीनवटा फरक साइजको लागि, जोडिएको एकसँगै। साथै, हामीसँग पनि छ दुई अन्य "रबर रिंग", विभिन्न आकारको, जसले कानको भित्र हेडसेटको राम्रो फिट प्राप्त गर्न सेवा गर्दछ।
यो Tronsmart ONYX PRIME हो
Tronsmart ONYX PRIME छ ढाँचा "कान मा", तर तिनीहरूसँग तिनीहरूको डिजाइनमा एक विशिष्टता छ जसको साथ केही निर्माताहरूले तिनीहरूको हेडफोनहरू पूरक गर्ने निर्णय गरेका छन्। धेरै अन्य मोडेलहरू जस्तै, यी Tronsmart हेडफोनहरू विवादास्पद कान प्याडहरू देखाउनुहोस् जुन कान भित्र रहन्छ र जसको कार्य भ्याकुम प्रभाव प्रदर्शन गर्नु हो। यसका लागि हामी फेला पार्छौं तीन फरक आकार.
ONYX PRIME सँग अर्को पनि छ अतिरिक्त रबर औंठी त्यो माइक्रोफोनको विपरित छेउमा छ। सेवा गर्दछ pताकि ह्यान्डसेट अधिक स्थिर छ हाम्रो कानमा र यो सार्न वा खस्न सक्दैन। थोरै अतिरिक्त जसले तिनीहरूलाई ए उत्कृष्ट विकल्प यदि तपाइँ तपाइँको साथमा हेडफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने शारीरिक गतिविधि को समयमा खेलकुद। एउटा सहायक जुन हामीले पहिले नै अन्य मोडेलहरूमा देखेका थियौं र यो प्रयास गरेपछि हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं कि तिनीहरूले आफ्नो मिशन पूरा गरे। हामीसँग पनि छ तीन फरक आकार ताकि फिट उत्तम छ। के तिनीहरू तपाईले खोजिरहनु भएको थियो? आफ्नो प्राप्त गर्नुहोस् Tronsmart ONYX PRIME अमेजनमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
हेडफोन एक छ कम्प्याक्ट आकारतिनीहरू हातमा सानो हुन्छन् र विशेष गरी जब हामी तिनीहरूलाई लगाउँछौं। निर्माण सामग्री, मा चमकदार प्लास्टिक, र धेरै थोरै तौल जुन यसले बनाउँछ कि हामीले तिनीहरूलाई लगाएका छौं भनेर हामीले सायद याद गर्दैनौं। घण्टा वा खेल खेल्दा प्रयोग गर्नेहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा।
कान बाहिर भएको भागमा, फर्मको लोगोको ठीक माथि, द टच नियन्त्रणहरू। तिनीहरू संग हामी गर्न सक्छौं संगीत प्लेब्याक नियन्त्रण गर्नुहोस्, ट्र्याकहरू अगाडि वा पछाडि छोड्नुहोस्, पज गर्नुहोस् वा प्लेब्याक सुरु गर्नुहोस्। सोही क्षेत्रमा हामीले ए सक्रिय आवाज रद्द नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने माइक्रोफोन। र तल, हामीसँग ए एलईडी बत्ती जसले हामीलाई जडान सक्रिय छ वा प्रत्येक हेडसेटको ब्याट्री स्तर बताउँछ।
El चार्ज केस, जहाँ हेडफोनहरू चार्जको लागि आराम गर्दछ, यो पनि कालो प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ, यस अवस्थामा म्याट फिनिशको साथ। हेडफोनहरू ओएसको लागि पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन् चुम्बकीय पिन। र तिनीहरू प्रस्ताव गर्छन् तीन अतिरिक्त पूर्ण शुल्क सम्म ताकि स्वायत्तता हो ONYX PRIME हामीसँग रहन सक्षम छन्। तपाईं अब Amazon मा किन्न सक्नुहुन्छ Tronsmart ONYX PRIME सबै भन्दा राम्रो मूल्य।
Tronsmart ONYX PRIME द्वारा प्रस्तावित सुविधाहरू
La स्वायत्तता यो एउटा पक्ष हो जुन हामीले एक वा अर्को मोडेलमा निर्णय गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार गर्न सक्छौं। हामीसँग प्रजनन छ संगीत आठ घण्टा सम्म जारी थियो प्रत्येक लोड को लागी। वाई कुल 40 घण्टा सम्म यदि हामीसँग चार्जिङ केस छ भने।
La कनेक्टिविटी तिनीहरू टेक्नोलोजीले सुसज्जित भएकाले तिनीहरूको एक बल हो ब्लूटूथ 5.2। सबै समयमा छिटो र सहज जडान। र धन्यवाद क्वालकॉम 3040० चिप, हामीले सुधारिएको अडियो गुणस्तर पाउँछौं जसले सुन्ने अनुभवलाई उल्लेखनीय रूपमा राम्रो बनाउँछ।
हामीसँग पनि छ परिष्कृत ट्रु वायरलेस स्टेरियो प्लस टेक्नोलोजी। यो नियन्त्रण गर्न सक्षम छ कि दुई हेडफोन को खपत सन्तुलित छ। र यसले जडानको स्थिरतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछ। मा पनि गणना हुन्छ QCC3040 चिपको तुलनामा सक्रिय आवाज रद्द धेरै सन्तोषजनक प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।
La ध्वनि गुण तिनीहरूले अपेक्षाहरू माथि प्रस्ताव गर्छन्।
स्वायत्तता प्लग को आवश्यकता बिना 40 घण्टा सम्म।
डिजाइन खेलकुदका लागि उत्तम।
आकार चार्जिङ केस र हेडफोनको औसत भन्दा माथि।
La समायोजन रबर यो असहज हुन सक्छ, यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि आकार सही छ।
मा पोष्ट गरिएको: 26 को डिसेम्बर 2021
अन्तिम संशोधन: 25 को डिसेम्बर 2021
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Tronsmart ONYX PRIME, विश्लेषण र प्रदर्शन